Saraakiil Mareykanka muhiim u ah oo shaqada uga tagay go’aankii Trump ee la bixidda ciidamadiisa Suuriya – Radio Daljir
Diseenbar 23, 2018 5:35 b 0
Sarkaal sare oo Mareykanka katirsan, muhiimna u ahaa la dagaalanka kooxda isku magacowday dowladda Islaamiga ayaa iska casilay xilkii uu ka hayay Suuriya, isagoona ahaa ergayga Mareykanka ee wadanka Suuriya, arrintan ayaa daba socota go’aanka madaxwaynaha Mareykanka Donald Trump ee ciidamadiisa uu ugala baxayo wadanka Suuriya.
Brett McGurk, ergayga gaarka ah ee madaxwaynaha Mareykanka ee kala shaqaynayay isbahaysiga adduunka ee la dagaalanka Daacish ayaa xilkaasi soo hayay tan iyo bishii February.
Kahor go’aanka Trump ee ah inuu la baxayo ciidamadiisa ka jooga Suuriya ayaa waxaa uu ku taliyay sarkaalkan in lasii wado dagaalka kadhanka ah Daacish ee wadanka Suuriya ee aan lasoo afjarin iyo inaan la dhimin ciidamada Mareykanka ee Afgaanistaan.
Horay ayaa waxaa xilkii iska casilay xoghayiyihii gaashaandhigga ee Mareykanka Jim Mattis , sababo la xiriira in ciidamadiisa kasoo baxayaan Suuriya oo uu aad uga soo horjeeday.
Madaxwaynaha Mareykanka Doland Trump ayaa sheegay iscasilaadda Mr McGurk’s inay ka dhigantahay mid aan waxba soo kordhinayn.
Folkaano iyo Tsunami ku dhufatay dalka Induniisiya oo khasaare badan dhaliyay